Sina 30ml amber-vera maivana-porofo momba ny fikarakarana hoditra tavoahangy ilaina menaka tavoahangy mpamatsy sy mpanamboatra | Kingtone
Tavoahangy menaka manitra ilaina amin'ny menaka manitra 30ml
Laharana maodely: SL-334
Fampiasana: tavoahangy Diffuser menaka tena ilaina
endri-javatra Tavoahangy mitete menaka ilaina
endrika endrika vaovao sy malaza
Color mazava na misy loko
Famolavolana sy fanontana namboarina
Vita amin'ny milina fanodinana, vita farany ny fanaovan-gazety,
Fametahana sary famantarana, serivisy fanontana ACL no misy
Horaisina ny fanamboarana.
★ Volavola fanaporofoana mivaingana: ny vavan'ny tavoahangy vita amin'ny volo dia misy fonosana firavaka alim-pito vita amin'ny volamena, izay azo apetraka akaiky mba hisorohana tsara ny famoahana rano.
Ny tavoahangy fitaratra azo ampiasaina, refillable, sariaka tontolo iainana ary azo ampiharina miaraka amin'ny rano mitete dia fanomezana tonga lafatra ho an'ireo tia menaka, namana na havana tena ilaina. Raha ny vokatra azonao dia tsy simba amin'ny lafiny rehetra, azafady mifandraisa aminay.
Kitapo tokana: 5.8X5.8X13.2 cm
Karazana fonosana: baoritra fanondranana mahazatra, palety na arakaraka ny zavatra takian'ny mpanjifa.
Previous: Tavoahangy fitetezana menaka ilaina menaka manitra miloko 50ml
Manaraka: Fonosana kosmetika tavoahangy ilaina menaka manitra 30ml